Wararkii Ugu Danbeeyey Qaraxii Xalay Ka Dhacay Magaalda Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Khasaaraha ka dhashay weerarkii loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo xalay maqribkii lagu qarxiyay Afaafka hore ee Madaxtooyada Villa Somaliya.
Dadka dhintay ayaa tiradooda lagu sheegay inay gaarayaan ilaa 11 ruux oo isugu jira dad shacab ah iyo sidoo kale Askar, halka wararka qaar ay sheegayaan dadka dhintay inay ku jiraan dad u dhashay dalka Turkiga oo xilliga qaraxa dhacaayay meesha ay marayeen.
11-ka ruux ee geeriyooday waxaa ku jira haween qaad ku iibinaayay afaafka hore ee madaxtooyada, halka qaar kalena dukaamo ay ku lahaayeen afaafka Madaxtooyada.
Sidoo kale dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa la sheegayaa inay tiradooda kor u dhaafeyso 20 ruux oo ciidan iyo shacab intaba isugu jira, waxaana dadkaan la dhigay dhaawacyadooda Isbitaalka Madiina iyo Isbitaalo kale oo Magaalada ku yaallo.
Dadka dhaawacmay waxaa ku jira Guddoomiyaha Degmada Warta Nabadda Yaasiin Ciise Nuur oo la sheegay xilliga qaraxa uu dhacaayay inuu meesha maraayay, sida ay xaqiijiyeen masuuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Banaadir.
Goobta qaraxa uu ka dhacay oo ah goob aad u bur bursan, ayaa saaka waxaa ka socotaa nadiifinta bur burka ka dhashay qaraxaasi oo isugu jira midkii baabuurka qarxay ah iyo darbiyadii soo dumay.
Qaraxan waxaa sheegtay masuuliyadiisa Ururka Al Shabaab oo sheegay weerarkaasi inay ku dhinteen Ajaanib iyo ciidan Dowladda ka tirsan oo ilaalo ka haayay afaafka hore ee Madaxtooyada Villa Somaliya.